Nuclear-ka Iran oo laga shirayo - BBC News Somali
Nuclear-ka Iran oo laga shirayo
Image caption Wadahadalka nuclear-ka Iran
Wada xaajood heer sare ah ayaa maanta ka dhacaya dalka Cumaan, todobaadyo un ka hor inta aanay dhammaan taariikhda loo qabtay in heshiis wax ku ool ah laga gaaro barnaamijka muranka dhaliyay ee nuclear-ka Iran.
Xoghayaha arrimaha dibedda ee Mareykanka, John Kerry, ayaa la filayaa in uu kulan la yeesho dhigiisa Iran, Maxamed Javad Zarif iyo haweeneyda Midowga Yurub u qaabilsan wada xaajoodyada, Catherine Ashton.
Waxa ay ka doodi doonaan sidii laba dhinac ay uga gudbi lahaayeen Isfahan waaga ku aaddan tayaynta maadadda uranium-ka, iyo qaadidda cunaqabateynta saaran Iran.
Ilo wareedyo ayaa BBC-da u sheegay in gacan yaraha ugu sareeya ee uu leeyahay hoggaamiyaha ruuxiga ah ee Iran, Ayatullah Cali Khamenei, oo lagu magacaabo Cali Akbar Velayati ay suuragal tahay in uu wadahadalka ka qeyb galo.
Sanadkii hore xilligan oo kale ayay ahayd markii Iran iyo lixda dal ee dunida ugu taagta roon ay ku heshiiyeen heshiis kumeel gaar ah, kaasoo lagu yareynayo howlaha nuclear-ka Iran isla markaana lagu qafiifinayo cunaqabateynta saaran dalkaasi.
Wixii markaa ka dambeeyay, waxaa jiray horumar laga sameeyay heshiis wax ku ool ah oo laga gaaro in Iran aanay samaeysay hub nuclear ah.
Balse xoghayaha arrimaha dibada ee Mareykanka ayaa sheegaya in weli ay jirto kala aragti duwanaan weyn oo dhinacayda u dhexeysa, gaar ahaan arrimaha la xiriira heerka uu la ekaan doono tayaynta uranium-ka ee Iran loo ogol yahay iyo weliba qaabka loo qaadayo cunaqabateynta dalkaasi saaran.
Labada dhinac ayaa garowsan fursada taariikhiga ah ee meesha taallo, waxaana ay cabsi ka muujiyeen cawaaqib xumida ka dhalan karta haddii aan heshiis la gaarin 24-ka bishan November.
Mr Kerry ayaa carabta ku adkeeyay in wadahadalka nuclear-ka aanu ku xirneyn iskaashi Iran lagala yeelanayo duulaanka ka dhanka ah ururka Daacish eek a dagaallamaya Ciraaq iyo Suuriya.
Warbixin dhowaan uu daabacay wargeys kasoo baxa dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay in madaxweyne Obama uu warqad si qarsoodi ah ugu diray hoggamiyaha ruuxiga ah ee Iran, Ayatullah Cali Khamenie, uuna kaga hadlay qaabka heshiis laga gaaro nuclear-ka dalkaasi uu muhiimad ugu leeyahay dagaalka ka dhanka ah Daacish.